Ndini ani? chidimbu 1: Beautiful Asi Broken — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Funga The Bourne Identity. Uyu murume anomuka ari chikepe uye haazivi kuti ndiani. Anowana chinotiudza uye anoenda kuna Switzerland. Anoomesa mukurwisana uye anoziva iye yakadzidziswa muhondo. Ko kuva achipenga kana iwe randomly vakawana iwe waiva pachivande Ninja unyanzvi? Nokuti vamwe firimu iye rwendo kuziva kuti ndiani. Iye anogona zvinhu haana kutombozviziva. Asi kana iye asingazvizivi, haangagoni kurarama akanyatsodii.
Ini usafungidzira munhu mukamuri ichi ane chakavanzika Ninja unyanzvi, asi zviri kuchiri kukosha kwatiri kuti kufunga kwedu kuzivikanwa.
Sei isu kuona kwedu kuzivikanwa ane zvikuru chokuita sei isu tiite hwedu. Ndoreva, Unoziva ani muri semunhu? Zvinorevei izvo? Unoziva kuti nei muri pano, chii kukosha wako, yezvauri vaikwanisa, zvauri vakafunga kuita? Nei kunyange muriko? Ndiwe ani? Kana tisingadi mibvunzo iyi tinogona kutambisa hwedu, kurarama sezvo munhu.
Zvinonyadza kana aifarira vatambi kukuvara kana kurega, uye ipapo vari vakarasika kwoupenyu hwavo. Nokuti nguva yose iyi vakafunga yavo nokuzivikanwa akanga ari mumhanyi. Ndizvo sei vamwe vakavaitira, uye zviri chii vakagamuchira. Saka kana ndizvo ndivanaani, ndizvo zvavachaita kudira upenyu hwavo. Zvino kuti zviri yaenda havana kurarama kuti.
Uye kune vechiduku Vakadzi vanoenda kubva ukama kuti ukama, vanova kufunga nezvechitarisiko chavo. Nekuti ivo vanofunga ravo nokuzivikanwa inobatanidzwa nokuva musikana vakanaka kuti vakomana vakaita. Zvino kuti kukurumbira rinosvava, yavari yakapwanyika. Ndipo vakawana chinangwa chavo. Kana uri kuvhiringidzwa pamusoro pezvauri, waunonzwa kuvhiringidzika pamusoro zvamunofanira kuita noupenyu hwako uye kuti anogona kuva migumisiro inosuruvarisa.
Ungati kudii kana ndikati imi muri? Student kana mutambi kana rapper kana mufundisi? Aihwa, avo zvinhu zvaunoita. Ndiwe ani?
Tinogona kurega nyika kutsanangura isu. Tinogona kurega shamwari dzedu kutsanangura isu. Tinogona kurega vabereki vedu kutsanangura isu. Tinofanira kurega Mwari kutsanangura isu nokuti Ndiye simba panyaya. Kana hatizivi ani tiri, hatigoni kurarama upenyu nenzira takaendeswa kusikirwa kurarama.
Ndaigona kutaura miriyoni zvinhu Rugwaro runoti nezvedu pamusoro, asi ndaifanira kuiganhura vachiita matatu. Wokutanga kuti tichataura pamusoro vari pachirongwa ichi ndechokuti tiri akaisvonaka akaita, asi kuputswa. Ndicho pfungwa chino: tose tiri akaisvonaka akaita, asi kuputswa.
Uye ndinoda kutarisa Pisarema 139 chekutanga. Dzokai ikoko kana une maBhaibheri enyu. Paunenge kutendeukira Ini achakupai zvimwe pfupi kumashure.
Uyu Pisarema wose sei Mwari anoziva zvinhu zvose uye ari kwose kwose panguva imwe chete. Anoziva apo Dhavhidhi anogara pasi uye paanosimuka. Anoziva zvaari kuzotaura asati inoti. Uye kwose kwose panguva imwe chete. Ari kudenga, Iye panyika, Iye pose pose. Dhavhidhi anorumbidza Mwari kuti.
Zvadaro kutanga mundima 14 iye anorumbidza Mwari soMusiki. Uye anotipa chavanomboziva kupinda ani tiri.
Ndinokurumbidzai nokuti ndakaitwa nomutoo unotyisa unoshamisa; mabasa enyu anoshamisa, Ndinoziva kwazvo. Mapfupa angu akanga asina kuvanzwa kwamuri pandakaitwa munzvimbo yakavanda. Pandakabhabhatidzwa dzakarukwa panzvimbo dzezasi dzapasi, Meso enyu akaona muviri wangu unformed. Mazuva ose akagadzwa kwandiri zvakanyorwa mubhuku renyu mumwe wavo asati vakasvika. (Pisarema 139:14-16, NIV)
Mwari akatiita. Ndicho pokutangira kwedu kuzivikanwa, uye tinofanira kurarama muchiedza kuti chokwadi.
Zvino ndava kuzvitutumadza vanhu vakawanda manheru pano kunzwisisa kuti Mwari ndiye Musiki wedu. Tose akasika isu. Kusiyana nezvinofungwa nevakawanda vanoti, tiri pano sezvineiwo kana mukana. Ndizvo saka kure Hadzisi uye hazviite. Takanga nemaune akasikwa naMwari. Uye izvozvo asiri vasingakoshi chinhu. Inoita mutsauko muupenyu hwedu uye zvinochinja tisazivikanwe dzedu.
Asi ndinoda kufungidzira kwekanguva kuti Mwari haana kutisika. Muri pano asingashumbi mukana. Hapana chinangwa kwakaunzwa chokuvapo kwenyu. Zvino edza kupindura mubvunzo iwoyo, chii muri pano? Upenyu hwedu neupenyu zvinoreva zvose uye kukosha kana vanova tsaona asingashumbi. Izvi zvinoreva mhuri haasi chaizvoizvo kureva chinhu, tsika dzedu zvisina musoro, nguva yangu nesimba havana chinangwa. Chinhu tsvarakadenga mwoyo nzira kuona nyika. uye sezvinei, zviri nhema. Musiki wedu akaratidza pachaKe kwatiri mushoko rake.
Kwamunobva zvakawanda pamusoro pezvauri inoti. Saka kana ndikawana chinoshamisa mudziyo uye handigoni kufunga zvokuita nayo, ndiani munhu yakanakisisa kubvunza? Munhu akaita izvozvo. Vangakuudza ini chii uye chii zviri nokuda. Tinoda kunzwa kubva kuMusiki wedu, iye akatiita.
mundima 14, David anoti ndiye "nomutoo unotyisa unoshamisa." Izvozvo zvinorevei?
Zvinorevei kuva nomutoo unotyisa akaita? Zvinoreva Mwari haana bedzi kukanda isu pamwe chete. Zvaikosha kwaari. Akaita isu pamwe nokukudzwa uye ashamiswe kwazvo. Zvakanga zvisiri zvakavhiringika kana asingashumbi. zvitema meso enyu chinangwa, kana shava ganda rako, kana makumbo ako refu. Zvose zvakanga nobgoni.
Ndinoyeuka ari uri mukirasi kuchikoro pakati, uye zvose Ndakaita zvakanga chinosemesa, asi kwete chinangwa. Pane izvi ndiro amai vangu vachiri pasherefu mumba medu. Ndicho ugliest chinhu zvauchasangana pachazombova. Hakusi kuti ndakanga ndisina anokwanisa kuita nani. Zviri nekuti handina hanya nazvo here kupa nguva kwairi. Ndaingoda kukurumidza uye kupedza saka ndaigona kutaura neshamwari dzangu. Mwari haana randomly isu kukanda pamwe. Akazviita nokungwarira kukuru. Akanyatsoongorora akarigadzirira iwe. Funga ane unyanzvi muvezi, vachinyatsoongorora chiseling kure kusvikira Paaidzidzisa ake akanaka.
Dhavhidhi anoti akanga "unoshamisa." Izvi zvinoreva akaita basa guru. Tiri zvisikwa zvinoshamisa. Vanhu vari incredible.
Anoenderera mberi achiti, “mabasa enyu anoshamisa, Ndinoziva kwazvo.” Iye anorumbidza Mwari nokuda kwake anoshamisa. Mwari ndiye Musiki zvinoshamisa. ZvaAkaita zvinoshamisa. Uye isu tiri pakati avo anoshamisa aMwari. Saizvozvo, tiri kupfuura chinoshamisa vose.
Handizivi kana wabatwa kupa Mwari rukudzo yakamukodzera nokuda ake anoshamisa? Vanhu vari incredible. Doctors vachiri kuedza kunzwisisa hwakaoma kunzwisisa ndechokuti womunhu muviri. Makore mashomanana apfuura ndakanga misodzi iri zvemapapu rangu uye vasingagoni kufema. Ndinoisa muchipatara, uye vanachiremba havana kuita chinhu nekuti muviri wangu kare kutarisira izvozvo. Mazuva mashoma gare gare ndakanga yakanaka. Tiri zvinoshamisa. We akadamburwa, asi zvakadaro zvinoshamisa.
Ehe saizvozvo, vanhu vanogona kutaura zvinhu nemhuka zvinogona kuita kuti hatigoni, semhuka kuti inogona kumhanya kana kuva nesimba. Tinoziva sei tiri kupfuura chinoshamisa kusikwa?
Tava akasikwa nomufananidzo Wake! No mhuka, kana chirimwa, kana munda, kana nyika akasikwa nomufananidzo waMwari. Akatiita kuti tive saIye! Mwari akasika zvinhu zvose kushamisira kubwinya kwake, uye isu tiri chikamu zvisikwa anowana kuratidza rugure zvakajeka zvikuru, nekuti tiri chikamu chiri akaita saiye.
Zvino funga pamusoro pazvo. Ndicho chinangwa chako chikuru muupenyu: kushamisira Mwari. Ndakaverenga imwe munyori kuti akafananidza nesu zvivezwa. Tiri akafanana mifananidzo Mwari pakusika. kwete Tiri Mwari, asi isu tiri akafanana naye. Isu vanomumiririra uye tinowana kuratidza muduku mufananidzo waiye. Ndinofarira mufananidzo kuti.
Saka manje? tsika dzedu kuramba kukudzidzisai kuti kusagutsikana. Unoda ichi. Hausi runako zvakakwana, Buff zvakakwana, dzakaonda zvakakwana, akanaka zvakakwana, ngwara zvakakwana, kana mitambo zvakakwana. Zvakanaka hausi vakakwana, asi imi muri nomutoo unotyisa unoshamisa.
Ndinoda kuti kugutsikana kuti. Vakomana kana vasikana arege kufunga uri ukwezve, asi iwe unoziva zvauri nomutoo unotyisa unoshamisa. Ungave usina vakaisvochenjeresa, asi imi muri nomutoo unotyisa unoshamisa. majee kwako kungava corny, asi imi muri nomutoo unotyisa unoshamisa. Muri zvinoshamisa, zvinoshamisa, incredible pakusikwa Mwari wemasimbaose. Uye hapana anogona kutora kuti kure!
Vamwe vedu vanofunga zvishoma pachedu. Tinofunga tiri hapana. Ndizvo inhema. Muri nomutoo unotyisa unoshamisa. Musarega munhu kukuudzai zvimwewo. Chii Mwari anofunga kukosha zvizhinji kupfuura zvauri kana vamwe vangafunga.
Vamwe vedu vanofunga yakawandisa isu. Funga Kanye West. Anoomesa ari munhamo, asi chinhu anoti zvinhu vose nechekare anofunga. Ane rwiyo inonzi "Ndiri Mwari." Saka vanhu vakawanda vanofunga ichi zvikuru pachavo. Asi imi muri chete chisikwa. Mwari oga ndiye Musiki.
Izvi zvine cho- sei tinoona vamwe. Hakunomunhu maturo. Hakunomunhu vasingakoshi. Mumwe munhu ari nomutoo unotyisa unoshamisa. Kana mayambuka kuti pekugara Guy mumugwagwa, yeuka iye haasi munhu. Hapana chinhu akadai hapana munhu.
Ko munhu ari pano babysit? Ndine mwanakomana muduku, uye kana mudzimai wangu uye ndinoda kuenda musi tine kuronga kufanana makore matatu pachine saka tinogona kuwana munhu anosara. Asi isu kubhadhara vanhu kuti vatarisire mwanakomana wedu apo isu tiri aenda. Babysitters maziso avo zvinhu avanotarisira. Zvakanaka zvose zvakasikwa zviri kuchengetwa naMwari. Uye Anochengeta meso ake pamusoro zvose, kusanganisira iwe.
Mwari haana chete kusika zvinhu zvose uye ipapo ngazviitike aende. Mwari ndiye kunofambidzana kuziva zvose zviri kuitika.
“Mapfupa angu akanga asina kuvanzwa kwamuri pandakaitwa munzvimbo yakavanda. Pandakabhabhatidzwa dzakarukwa panzvimbo dzezasi dzapasi, Meso enyu akaona muviri wangu unformed.” (Pisarema 139:15-16)
Ari vachiti kunyange paaiva mudumbu Mwari akamuona. Ichokwadi paanenge ari kuti mudumbu hapana munhu anogona kumuona. Havazivi zvakawanda nezvake asi. Asi Mwari anoona iye, kunyange paaingova chakakura nzungu. Mwari ari kutarisira iye, nokumutsigira, knitting iye pamwe chete.
Apo mudzimai wangu uye ndakaziva akanga nepamuviri, takaenda chiremba woMuvhuro rakatevera. Uye tinogona nechekare kunzwa kurova kwehana. Akanga dikidiki saka, asi Mwari aimuda uye achimukwidza. Mwari akaona unformed muviri wake muduku. Hakuna chinhu chinonzvenga nemaonero aMwari.
Kana Mwari vakakanganwa iwe, iwe vaizoziva. Anochengeta yedu kurova nemapapu kufema.
Tose tiri asingaoneki. Mwari anoona isu uye anonyatsofarira muupenyu hwedu. Izvi zvinofanira kuva nyaradzo kwatiri. Hapana kuti tinogona kuenda kuburikidza kuti Mwari haana kuziva. Hapana dambudziko kana kukuvara. Mwari ane hanya nezvinhu zvinorwadza iwe. Haufaniri kurwira kukosha-wave kare kukosha.
Zvakadini kana muimbi chaunofarira akatumidza zita renyu panze paTV, asingadi kuti vave zvinoshamisa? Kunyange kana iwe kumbobvira unofanira ruoko rwavo, zvingava zvakakwana kuti chete vaiziva makanga. zvikuru sei zvinoshamisa kuti Mwari vanoziva tiri. Ko kuti kuva zvakakwana?
“Mazuva ose vakagadzwa kwandiri akanga akanyorwa mubhuku renyu mumwe wavo asati vakasvika.” (Pisarema 139:16)
Baba vangu vaiwanzoti mhando zvose zvinhu kwandiri kuti akadzinga ini vanopenga. Nokuti chimwe chinhu, aizosiya ose mashoko yandakaita kunyika ine ngozi vamwe mhando. Asi chimwe chinhu aiti ari, “mukomana, Ndinoziva imi kupfuura imi munoziva pachako.” Hazvaizova ini saka unopenga. Asi zvino rimwe zuva ndakazoziva chaiva chokwadi. Sei? Nekuti mbudzana wangu uropi shoma kunzwisisa zvinhu. Asi baba vangu vaiziva.
Mwari anoziva zvinhu pamusoro pedu kuti kunyange tisingazivi nokuti isu hatisi naYe. Kedu dzevanhu uropi anogona kunzwisisa zvose.
Anoti Mwari aiziva zvose Aizoita asati kunyange kuberekwa. Mwari anodzora zvinhu zvose uye anoziva zvinhu zvose. Anoziva kuti bvudzi zvakawanda pamusoro wako. Anoziva zvauri kufunga izvozvi. Anoziva uchaita huno uye mangwana. Mwari chete aigona kuziva zvakawanda pamusoro vose mabhiriyoni manomwe vanhu panyika.
Ndicho chikonzero nei tichifanira kutarira Bhaibheri kutiudza uyo tiri. Nokuti Mwari ndiye akatisika uye iye rinogona kutiudza. Anotiziva zviri nani kupfuura zvatinoita
Ndicho zvinorumbidzwa! Haafaniri atifarire. Mwari haana kumbobvira akawana chimwe chinhu kunze. Ari kumbova chakaipa. Ari kumbova kushamisika. Haasati vaifanira kutarisa chinhu. Haasati akaita chisarudzo pamberi kuwana zvose zvinobatanidzwa. Anoziva zvose!
Hazvirevi izvi kuti uchida kuti tivimbe naye?
inofanira. Asi sezvo ndakatoiverenga kutaurwa, vamwe vedu vanofunga zvakare zvikuru isu. Uye ndizvozvo zvikurukuru nemhaka tinokanganwa ichi chikamu chechitatu. Tinokanganwa kuti tiri vo kuputswa.
Hatisi chete unoshamisa; tiri vo kuputswa. Bhaibheri rinoti takasikwa naMwari nomufananidzo Wake. Taiva kwakakwana uye zvakakwana zvakabatana kuna Mwari. Asi kana chivi chakapinda munyika, sezvarakangoita tose. Uye apo taiwanzokuudzai zvakagwinya, tava kuputswa. kuwa yedu yakaita akanaka sekristaro chivezwa kuitwa akadonha. Zviri zvidimbu. Zvino pane chirwere, rufu, uye vakaipisisa chivi zvose.
Ini zvanyanyisa iPhone uyu haana zvakare kare. Zvinoshanda zvakanaka. Asi ndisati Ndine uyu mutsva wangu iPhone akanga akaipisisa. Ndakasiya nguva dzose, saka chidzitiro yakanga wakatsemuka. Zvaiva zvechokwadi kunonoka. Zvaiwanzoita yakadonha pamusoro pangu. Ndaisada kupedza mari itsva imwe asi zvazvo. Ose zvino ndobva vaizosangana pachangu vachinyunyuta pamusoro sei rinotyisa foni yangu yakanga. Asi ndaizviita kurangarira kudzokera sei mafoni anoshandiswa kuva. Wokutanga foni ndakawana aiva mumwe vokutanga vane ruvara sefa. Ndakafunga kuti yaiva zvinoshamisa.
Asi wangu ndakavhiringidza iPhone aiva miriyoni nguva nani pane kuti foni yokutanga Ndine. Ndingadai tichizviziva anogona ndakavhiringidza, asi zviri kuchiri zvinoshamisa. Zvingava kunonoka uye wakatsemuka, asi iwe uchiri kuona muchidimbu rayo amazingness. Ndichiri kutora mifananidzo yakanaka pamusoro payo. Ndichiri kukwanisa paIndaneti nacho. Ndichiri kukopa zvinhu pamusoro payo. Ndine Apps nemitambo pairi. Apple akaita chinhu chinoshamisa basa iri kuti pafoni. Kuti pafoni rwaishamisa, asi kuputswa.
Saizvozvowo, Mwari akaita chinhu chinoshamisa basa pamusoro pedu, asi isu akadamburwa. Kana kutarira kwatiri, unogona achiri kuudza tiri zvisikwa zvinoshamisa, asi zviri pachena kuti zvatiri yakaputsika. Hatidi nokusingaperi. Tichirwara uye kufa. Isu kuvadza edu Zviziso. Hatidi kugara kurangarira zvinhu nokuda miedzo. Isu tichirwadziwa nevamwe. Uye isu vanotadzira Mwari.
Unombonzwa kufunga kuti chokwadi kuti uri yakaputsika? Vazhinji vedu nepa hwedu kuzvitutumadza tiri chete yakanaka. Tinowana kunyengedzwa nokuti zvatinoziva sevasina zvasiyana pane mumwe munhu yakatipoteredza. Asi chokwadi chiri, tose akadamburwa. Ndinoda kutarisa mbiri zvikuru nzira kuti isu akadamburwa.
Chekutanga, tiri mumuviri kuputswa. Apo tiri vaduku tinorarama pasi pfungwa yokuti tiri kuita zvakanaka. Uye isu tiri kukwanisa kufunga kuti nokuti zvatisingaoni chero zviratidzo mukuputsika kwedu asi. zviratidzo pamwe diki, asi isu hanya navo. Zvakafanana apo mudzimai wangu akanga achidzinga kwedu Ford Explorer. Zvakatanga kuita ruzha, asi iye chete akaramba achidzidzinga naro. Pashure pemavhiki mashomanana takanga kutyaira kubva Chesapeake Bay uye vhiri rinenge vakagura. Pane kupira zviratidzo, tinofanira kuziva vavo.
Mumwe munhu ari muBhaibheri akaitwa kunofambidzana kuziva nyika yedu Jobho aiva. Zvose akatorwa kubva kwaari. Pakati rwokuungudza pamusoro ake ezvinhu iye anoyeuka mamiriro vanhu vose. Pano ndizvo zvaanotaura:
“Murume akazvarwa nomukadzi mashoma mazuva uye azere nokutambudzika. Achibuda seruva uye rikaoma; iye Anotizawo somumvuri uye mberi kwete.” (basa 14:1-2)
Jobho ari achiti mazuva edu hazvisi haaperi. Hatina isingaperi nhamba yemakore kurarama. zvose tichafa vamwe zuva. Tinogona kubuda akanaka seruva, asi isu richaoma. Kana achitaura nezvedu kuoma, iye zvinoreva miviri yedu zvishoma nezvishoma akavhara pasi pamusoro pedu. runako wedu achasvava uye kuderera. Vari havasi kuenda kubasa uyewo vanoita ikozvino. Uye pakupedzisira tichafa. Zvino wakati isu chingaenzana mumvuri, iye kukurukurirana kuti upenyu huno hakusi kwechigarire. Totaura kupera.
Ndakaverenga Time magazini nyaya nhasi rakanzi: "Google Unogona Kugadzirisa Rufu?"Nyaya akataura pamusoro chinzvimbo boka uye sei anoda kupfura kuti mwedzi. Hapana uwandu zvesainzi kuti unogona kugadzirisa dambudziko rufu. zvinoitika. Rufu chinhu chaicho kuti Google haagoni kugadzirisa.
saka ehe, tiri unoshamisa. Tiri kupfuura zvinoshamisa kusikwa, asi kubvira Fall tiri yakaputsika.
mukuputsika yedu rinotiyeuchidza kuti hatizi Mwari. Hatifaniri kufunga kuti miviri yedu duku kuti dzinoshanda zvakanaka ikozvino tiri chii tinotofanira nokusingaperi. Ichi chikonzero chakanaka chokuti isu kwete kumirira kusvikira kwapera kushumira Mwari.
Naizvozvo nzira yokutanga yatiri nokuvhuniwa mumuviri. Asi isu tiri kuputswa mumudzimu.
"Hakuna akarurama, aihwa, hapana chimwe; hakuna anonzwisisa; hakuna unotsvaka Mwari. Vose vakatsauka; pamwe chete vava maturo; hapana anoita zvakanaka, kunyange nomumwe. Huro dzavo guva rakashama; vanoshandisa ndimi dzavo kunyengedza. Uturu hwemhungu hwuri pasi pemiromo yavo. Muromo wavo uzere nokutuka nekuvava. tsoka dzavo dzinokurumidza kuteura ropa; mumakwara avo vari kuparadza nekutambudzika, uye nzira yerugare havana kuiziva. Hakuna kutya Mwari pamberi pameso avo. " (Romans 3:11-18)
Ndima iyi iri mubhuku raVaRoma apo Pauro anotanga kure kutaura sei vose vakatadzira Mwari. uye pano, pano Chiri kukuudza vaJudha, hongu kunyange iwe. Tose.
“Zvirokwazvo, hapana munhu akarurama panyika, anoita zvakanaka uye asingatadzi.” (Ecclesiastes 7:20)
Zvino chikonzero isu kazhinji kufunga tiri vanhu vakanaka ndiye chiero isu usaruyera kubudikidza: mumwe nomumwe. Saka chokwadi zvichienzaniswa nevamwe vanhu Ndiri munhu akanaka. Handina kuuraya vanhu. Handisi gandanga. saka, Ndiri munhu akanaka, rudyi? Kwete maererano neBhaibheri. Kubva dzevanhu nemaonero, chokwadi unogona kuva munhu akanaka. Asi chii tinofanira chaizvoizvo kufarira ndiko nemaonero aMwari.
Uye sezvo isu tiende kuburikidza, tichinyatsoda havagoni nharo naye. Zvose vechokwadi.
Uye ukacherechedza kuti ari kuita nyaya kuti chikamu ose wedu ndakavhiringidza-kunzwisisa, huro, ndimi, miromo, muromo, tsoka, meso-tose! kwete Tiri vanhu vakanaka vanoita zvinhu zvakaipa dzimwe nguva. Tiri vanhu vane chivi avo chivi kazhinji. Tine mwoyo vanorwara.
Tichatevera Kazhinji kutaura tinonzwisisa chokwadi ichi, asi haina kuratidza kukwira munzira yatinogara hwedu. Tinoti tinoziva Tiri kuputswa, asi isu tiri vasingadi kubvuma tisiri zvakarurama mumamiriro ezvinhu. Apo mumwe munhu mhosva nesu, zvataipomerwa rokutanga, pachinzvimbo kuzviongorora, anogara kukupindurai. Pamwe isu chete nharo, kana pamwe isu mhosva pachinzvimbo. Kana tichinzwisisa Tiri kuputswa, ipapo pamwe tinofanira chete kuzviongorora kutanga. Muri kutadza, izvo zvinoreva unogona kuva chakaipa.
Kana sei nezvazvo-tichitarisira pasi vamwe vanhu muchivi chavo. Kana dai mumwe nomumwe wedu haasi kuputswa uye ichida Muponesi chete. Hapana anogona kutaura zvavari nani kupfuura iwe, uye haugoni uri nani kupfuura pavo. Vanogona zvitadzo kupfuura iwe, asi isu tiri akavhuniwa vatadzi vose vanoda Muponesi akakwana. kunyange kuipa, isu kuvimba pachedu kuenda kudenga.
Tine mwoyo uye mwoyo apo zvose zvinobva. Saka kwava sezvinoita chirongo chemvura chinozadzwa muchetura. Ose girazi iwe ndokuadira kuchaita kuti muchetura. Saka fungidzira kuti akasiyana magirazi Mirangariro yenyu, zviito, zvido, uye zvisarudzo. Zvose izvozvo rinamakwapa.
Tiri saka kushandiswa kutadza kuti hatidi kufunga kuti hombe, asi zviri. Chivi chinhu akatichengeta kubva Mwari. Chivi chinhu zvichaita kutitadzisa husingaperi. Tinogona kufunga kutyisa vanhu kana mamiriro ezvinhu zvakaipa muvengi wedu akaipisisa. muvengi wedu chaiye akaipisisa kuti angatikuvadza zvikuru kukuvadza chivi kwedu. Zvimwe zvinhu zvinogona kutikuvadza kwechinguvana, asi nekuda kwezvivi zvedu tinogona kurangwa zvachose. Zviri chivi chinoita kuti isu muvengi waMwari.
Vamwe vedu vanofunga kuti tinokwanisa kumbobvira akaita mhosva. Asi rakaipisisa mhosva vose Universe ndiko kutadzira Mwari. Iye yakakwirira zvikuru kupfuura simba mupurisa, kana mutungamiri. Iye Mwari! Uye kunyange kana tisina vakapondwa, chokuti tava nhema kuchiri chinhu icho chivi chakashata kuzorwa Mwari.
Tiri akafanana wakaputsika girazi. Patinofungisisa mufananidzo waMwari, asi haana kuita isu tinofanira. Ndizvo zvatinofanira vakaitwa kuita. Asi isu kuratidza yakanyangara kunaka mufananidzo. Rudo anotendeukira ruchiva. A chido kupa anotendeukira makaro. Kuzvipira ichichinja zvidhori. Ndizvo chivi zvose, uye Mwari anovengawo.
We Are Vanotambura
Ndicho nhau zvakaipa. Chii akanaka?
Tinofunga chete vanhu vakanaka vanoenda kudenga, uye yechokwadi mupfungwa. Asi hapana wedu zvakanaka. Saka tinoda mumwe kutipa kunaka kwavo. Kuti munhu ndiye Jesu.
Izvi zvinoreva kuti tinogona kuisa tariro yedu muna mumuviri kana pakunamata kwedu muchizvinyengera. Havachina wakaputsika uye achaita ngatirambei pasi. Tiri havagutsikani. Tinoda Jesu kutiisa shure pamwe.
Kana isu akavuniwa chete mumudzimu kana chete mumuviri kuputswa, pamwe hazvina sokuti akafanana mikuru pachibvumirano. Just mumuviri, kuti yakanaka nokuti kana tikafa tiri zvakanaka. Kana chete pamweya, isu haumbofi kutarisana Mwari nokuti ticharamba haungambofi. Asi kana nzira tichasangana kumira pamberi paMwari mutsvene uyo akatsamwira chivi chedu.
Unoziva muri vanoshayiwa? Zvakanaka akanaka ndechokuti unogona kuponeswa. Pane Muponesi uyo asangana edu. chikuru.
"Ruponeso rinowanikwa hapana mumwe, nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa kuvanhu ratinofanira kuponeswa. " (Acts 4:12)
Jesu ndiye chete anogona kudzorera chii wakaputsika. Ndiye chete anogona kubatanidzwa isu naMwari. Ndiye tariro yedu chete. Nokuti akafira kumukira kwedu. Akamuka kubva muguva. Takaona racks kukwira rugwaro. Jesu akabhadhara zvose.
Saka kuti Recap: ndiwe ani?
Mwari ane hanya nesu nokuti akatiita. Iye anotarira pasi uye achiri anoziva isu sezvo korona zvisikwa Rake. Asi anoona kuti tiri anotyisa wakaputsika. Tiri vachida Muponesi.
Haufaniri kufunga uri muKristu pano nhasi nokuti waita waenda kuchechi. Kana usina chokwadi kuti imi akadamburwa, Zvawava vakagumburwa Mwari, kuti iwe muponisi. Kana usiri wekushanduka pachivi. Kana usiri kuvimba Kristu, ipapo iwe hausi mwana waMwari.
Muchikamu chinotevera, tichataura nezvekuti Mwari adopts kutiisa mumhuri yake. Ngatitorei kunyengetera.
1. Sei chokwadi kuti Mwari akatisika kuchinja upenyu hwedu? Chii musiyano zvichava kuti svondo rino?
2. Sei upenyu hwako vachiziva kuti Mwari anoona zvose? Chii musiyano here kuita kuti Mwari anotiziva kunofambidzana?
3. Sei unzwe kuziva muri kuzofa rimwe zuva?
4. mukuputsika kwedu pakunamata anoratidza sei kumusoro hwedu?
5. Chokwadi chokuti hapana wedu akanaka kunoreva isu chete vanorigamuchira uye kurarama nenzira?
6. Zvinorevei kunyatsoda kupfidza chivi uye kutenda muna Jesu?
Michael nokuruma • Kurume 4, 2014 pa 9:46 pm • pindura
Chokwadi nhindi nenjere uye kudzidzisa rinotyisa. Akakomborera nayo
Allan • Kurume 5, 2014 pa 3:36 pm • pindura
Izvi zvakanga kwazvo good.May Mwari vakuropafadzei.
Glore • Kurume 6, 2014 pa 11:23 ndiri • pindura
Love BRO. Ndinoziva here kuti mimhanzi yako uye unyanzvi mumunda zvakare. mharidzo Great. Havagoni kumirira chinotevera.
Solomon King • Kurume 12, 2014 pa 6:27 pm • pindura
Ndinonzwa wakakomborerwa, Ndiri wakakomborerwa!
Havagoni kumirira okupedzisira chikamu.
Mwari komborera, rwendo.
MichaelSmith • Kurume 14, 2014 pa 12:34 pm • pindura
rwendo, Ndinokutendai nokuva nziyo chakasimba zvakadaro kuteerera, uye nemhaka dzidziso idzi. Havana zvikuru kuteerera pakudzidzisa uye kurudziro, Ndinonamata kuti Mwari anoramba akuropafadzei, uye kuti rimwe zuva ndasvika vava kudzidzisa munhu.
Payne • Kurume 19, 2014 pa 7:06 ndiri • pindura
Ichi chikuru! Kana chido rinotevera 2 mavhidhiyo achasunungurwa?
Juan • Kurume 19, 2014 pa 10:49 pm • pindura
mashoko Great rwendo yemamwe rudo nzira imi akachiisa vose ose unobata zvikuru kuziva kuti ndiri zvakanaka akaita Mwari zvikuru akuropafadzei uye mhuri
Ariel • Kurume 25, 2014 pa 7:39 pm • pindura
Uyu mharidzo huru yakadai. Chaizvoizvo kwakandibatsira akaziva kuti yangu nzira mafungiro pachangu zviri chakaipa. Mwari ari kushandisa iwe!
uyewo Christian • Kubvumbi 23, 2014 pa 1:16 ndiri • pindura
Leo • Zvita 11, 2015 pa 10:43 pm • pindura
zvakanaka kwazvo, Mharidzo uye vechidiki vanoda!